Enyocha Indianapolis Star mgbe Ọnwụ Photojournalist Mpozi Tolbert nwụsịrị | Martech Zone
Ọnwụ dị egwu nke Mpozi Tolbert, 34, ka ndị ọrụ gọọmentị Indiana na-enyocha iji chọpụta ma ọ bụ ma ọ bụ na enweghi OSHA mmebi iwu.
Ahụtụbeghị m Maazị Tolbert mgbe m na-arụ ọrụ na The Star, mana ọ nọ na igwe mbuli ugboro ole na ole na nwa nwoke a dị nro. Echetara m na ọ tụrụ ụjọ ya ga-ewere ọkara igwe mbugo! Onye ọ bụla sitere na ụlọ akwụkwọ akụkọ ahụ ga-amụmụ ọnụ ọchị ma kwuo hi mgbe ọ nọ gburugburu. Agụwo m na Mpozi maara na ọ na-edebe nri n'ezie iji nye ndị na-enweghị ebe obibi nri. Ọ bụrụ n’ịchọ ịntanetị ị ga - ahụ etu onye nwere amamihe si rụọ ọrụ.
Nkọwa ziri ezi nke ọnwụ Mpozi na-egosi na ha na-egwupụta onwe ha na ntanetị karịa akwụkwọ akụkọ. Ruth Holladay, onye bụbu onye nta akụkọ nke Star, na-ede blọgụ oge niile banyere ọnwụ Mpozi ma na-akatọ Star. Mgbe m zutere ọtụtụ n’ime ndị isi nhazi akụkọ na Star, enwere m ike ikwu n’onwe m na ejiri m n’aka na ha niile na-enwe mwute maka ọnwụ Maazị Tolbert. Enwere ike ịkatọ nzukọ Gannett na usoro nchekwa, mana echeghị m na ọ dị mma ịwakpo ndị ọma na-arụ ọrụ ebe ahụ.
Ihe a choro maka ndi oru ka ha kpoo nche karia 911 bu ihe kpatara nsogbu. N'ịbụ onye sitere na nkuzi nke ndị ọrụ Star, enwere m ike ịgwa gị na nke a bụ iwu na-ese okwu na-atụle ogologo oge. Tonweta igwe mbuli na-egosipụtakwa nsogbu. Lọ ahụ emeela ochie, yabụ enwere naanị igwe mbuli elu 2 nke ndị ọrụ niile nwere ike ịnweta - ma ha abụọ anaghị akwụ ụgwọ. N'ọnọdụ a, ọ dị ka a na-atụgharị ndị nnapụta gaa na mbuli onye ọrụ, ihe nwere ike ịbụ na ọ kpụchara nkeji oge ha nwara ịchekwa Mr. Tolbert.
Kedu ụzọ ọ bụla, ụwa tụfuru nwoke nwere nkà na ezigbo ezigbo mmadụ. Ndị na-ese foto nwere onyinye pụrụ iche nke na-enyere anyị aka ile ụwa anya site na anya ha.
Nke Indianapolis Star Nkeji edemede
Foto osisi Mpozi na IndyStar.com.
Akwụkwọ mbụ nke Ruth Holladay
Ruth Holladay Nkebi nke Abụọ
Vidio na akụkọ
Nke a bụ ihe ncheta na gallery nke ndị enyi Mpozi debere
NPPA Nkeji edemede
N'ụzọ dị mwute, MySpace nke Mpozi
8/18 - Monitor, akwụkwọ nke National Association of Black Journalists, ebipụtala akụkọ taa na mbipụta ya. Lee njikọ… http: //nabjconvention.org/2006/monitor/pdf/fri/NABJ81811.pdf
Nkuzi m na-aga ezi na ụlọ nke Mpozi, enyi nwanyị, ndị enyi ya, na ndị ọrụ ibe ya… gụnyere ndị ọrụ niile na The Star. Lee nnukwu mfu.
Jul 29, 2006 na 8:28 PM
Isi ọzọ dị mwute na akụkọ dị oke egwu. Echere m na mgbe mmadụ nwatakịrị na-anwụ anwụ na-achọsi ike maka ihe ma ọ bụ onye ịta ụta na-enwe olileanya ịme ka ụwa dị mma. Ma ọ bụghị ya, ọ dị nnọọ oke egwu na egwu.
Adịghị m ọkàiwu, mana na iwu ọ bụla nke 911 na-akụ m ihe dị ka mmachi na mmebi iwu site na njikwa. Ọ bụ ezie na enweghị ụzọ isi kwuo na nkeji ndị ọzọ gaara azọpụta Mpozi naanị na ọ ga-ekwe omume bụ ihe jọgburu onwe ya, enweghi ike ịnagide ihe ọ bụrụ.